Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo saacad dheeraad ah ku daray xiliga uu furmaayo Kulanka Golaha Shacabka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa goordhow gaaray xarunta fadhiyada Baarlamaanka ee Golaha Shacabka waxa uuna sheegay in uusan wali buuxsamin Kooramka Xildhibaanada si loo furo fadhiga Golaha Shacabka.
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in saacad dheeraad ah lagu daray furitaanka fadhiga Golaha Shacabka islamarkaana uu furmi doono saacad kadib xiligii uu furmi jiray.
“Saacad dheeraad ah ayaa ku daray furitaanka fadhiga Golaha Shacabka maadaama aysan wali soo buuxsamin Kooramka” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay soo laa-laabatay dib u dhaca kulamada baarlamaanka loona baahanyahay in ay Xildhibaanada ilaaliyaan Waqtiga maadaama ay hortaalo shaqo badan.
Golaha Shacabka oo maanta Warbixin ka dhageysanaya Guddiga doorashooyinka